🥇 ▷ Sida loo maareeyo ogeysiinta COVID19 ee ku saabsan iPhone ✅
Sida loo maareeyo ogeysiinta COVID19 ee ku saabsan iPhone
Markii arrimuhu adkaadaan, qaybta adag ayaa sii socota! Maxaa ka dhici kara mudaaharaad ballaaran oo xoog leh oo looga soo horjeedo masiibada COVID-19 ee cabsida leh, labada teknoloji ee ugu waaweyn teknoolojiyadda: Apple iyo Google ayaa wada mideeyay si ay u soo bandhigaan xiriirka Coronavirus ee ku saabsan barnaamijka iOS iyo Android. Loogu talagalay Ka caawi dowladaha iyo hay’adaha caafimaadka yareynta faafitaanka viruska.Muuqaalkaan diirada ku saaraya caafimaadka wuxuu hubinayaa in la socodka xiriirinta, oo sidoo kale loo yaqaan “Ogeysiinta Muuqaal”, inuu ahaanayo mid sugan oo sir ah. Haddii aad rabto inaad ka faa’iideysato kaalmada la dagaallanka masiibada, aan baranno sida aad wax uga qaban karto COVID: 19 ogeysiisyada soo-gaadhista ah ee iPhone-kaaga!
Daar COVID-19 Ontiito Ogeysiisyada Soo-Gaarka ah ee macruufka
Miyaad la yaabban tahay sida raad raacku ula xidhiidho? Way fiicnaan lahayd in horay loo sii xalliyo su’aalaha qaarkood.
Marka sidee ayuu COVID-19 Ogeysiinta Muuqashada loogu shaqeeyaa iPhone?
Marka ugu horreysa, raadraaca CVEID-19 ayaa ah qayb ka mid ah iOS 13.5, oo hadda ku jira nooca beta ee soosaaraha. Waxay isticmaashaa Bluetooth, mana ahan GPS, inay u shaqeyso si habsami leh. Sida caadiga ah, ogeysiinta soo-gaadhista waa la naafo yahay. Si kastaba ha noqotee, waxaad dooran kartaa inaad awood u siiso / joojiso ogeysiiska soo-gaadhista Apple iyo Google ee qalabkaaga iOS markasta oo aad rabto.
Maxaa kale oo aad u baahan tahay si aad u isticmaasho raad raac xiriir? Hagaag, waxaad ubaahnaan doontaa inaad rakibi app ka tirsan maamulka caafimaadka deegaankaaga una oggolaato inuu isticmaalo xogta Bluetooth. Apple iyo Google waxay kaloo caddeeyeen inay ka shaqeynayaan sidii ay ula xiriiri lahaayeen astaamaha raadraaca xiriirka mid aan u baahnayn in lagu rakibo barnaamij saddexaad oo ah hay’ad caafimaad, laakiin taasi xaqiiqda kama tarjumayso illaa dabayaaqada sanadkan.
Wax kale oo mudan in horay loo sii sheego ayaa ah raadraaca xiriirka lama heli doono meel walba inta lagu gudajiray soosaarka rasmiga ah. Laakiin iyada oo la eegayo ahmiyadda shaqadan, waxaan rajeyneynaa in laga hirgaliyo waddamada badan waqti dhow.
Markaad karti u yeelatid tilmaamaha raad-raaca taabashada ee iPhone-ka, aaladda isweydaarsiga aqoonsiga aan tooska ahayn ee aaladaha kale adoo isticmaalaya Bluetooth. Waxay u oggolaaneysaa codsi inuu kuu digayo haddii ay dhici karto inuu ku dhacay COVID-19. Haddii weligaa (nasiibdarro) lagaa helo Coronavirus, waxaad si fudud ula wadaagi kartaa kaararka aqoonsiga qalabka ee barnaamijka loo oggolaaday si aad ugu sheegto kuwa kale adigoon is ogayn.
Ka waran qarsoodiga macluumaadkaaga qarsoodiga ah? Waa hagaag, Apple waxay leedahay diiwaangelinta soo-gaadhista ma geli karto xog caafimaad midna kuma dari kartid wax xog ah barnaamijka Apple Health. Intaa waxa u dheer, IDS-yada la soo uruuriyey ayaa lagu kaydiyaa 14-ka maalmood ee la soo bandhigayo. Laakiin ha walwelin, waxaad dooran kartaa inaad nadiifiso dhammaan diiwaanka soo-gaadhista mar alla markii aad rabto.
On your iPhone leh macruufka 13.5 ama wixii ka dambeeya, bilowga Barnaamijka Qaabeynta.
2. Hadda, xoq oo hoos u taabo Asturnaanta.
3. Kadib taabto Caafimaadka.
4. Kadib taabto CVIDID-19-19 Rikooga Muujinta. Hadda, u dhaqaajiso kabaalka si Diiwaanka muuqaalka
Fadlan la soco inaad u baahan tahay barnaamij la oggolaaday si aad awood ugu yeelatid astaantan. Isla isla shaashadda, waa inaad aragtaa ikhtiyaarka si aad u tirtirto diiwaanka soo-gaadhista. Haddii ay dhacdo inaad rabto inaad tirtirto rikoorka sabab shaqsiyeed, waad tirtiri kartaa.
Kuu taabo / dami lasocoshada taabashada ee iPhone
Taasi waa ku dhawaad ​​wax walba! Waxaan qiyaasayaa inaad imminka haysid fikrad fiican oo ku saabsan sida muuqaalkan muhiimka ah u shaqeyn doono. Marka sida ugu badan uga faa iidayso inaad gacanta ku dhigto fayraska ama ugu yaraan kula dagaallanto hab wanaagsan. Maadaama aan ka hadlayno Coronavirus, waxaan kugula talin lahaa inaad fiiro gaar ah u yeelatid barashada qoob ka ciyaarka iyo barnaamijyada barashada muusikada maxaa yeelay waxay kuu ogolaan karaan inaad ka dhigto naftaada karantiil fursad weyn oo aad ku maareyso qoob ka ciyaarka ama aad u hagaajiso awoodaada muusikada. Oh haa, waxaa sidoo kale jira xaalado aad u fiican oo iPhone 11 ah oo kuu oggolaanaya inaad jeermiska aaladdaaga ku dhacdo.